Qabsoon barnootaan hindeeggaramne qawwee rasaasa hinqabneedha
Qabsoon barnootaan hindeeggaramne qawwee rasaasa hinqabneedha Featured
Doktar Muktaar Mohaammed
Qabsoon biyya tokko keessatti kallattii maraan taasifamu barnootaan yoo deggarameen alatti jijjiirama waaraa biyyi ykn uummatni eegu ni fida jedhanii yaaduun dogoggoradha. Barnoonni siyaasa biyya tokkoo jijjiiruu, dinagdee biyyaa fooyyessuufi hawaasummaa lammiilee cimsuu keessatti shoora ol’aanaa qaba.
Dhimmi kun maaf ka’e jechuun hin oolu. Akkuma beekamu Yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaa keessatti ajjeechaan barattootarra gahe balaaleffachuufi bakka tokko tokkotti ammoo qormaata bahumsaa eebba booda lkennamu mormuun sosochiin baruu barsiisuu yeroof dhaabatee ture.
Dhimma kana ilalchisuun gareen gaazexeessitootaa tibbana gara Yuunivarsiitii Odaa Bultumitti bobba'uun qaamota dhimmisaa ilaallatu waliin haasa’aa taasisee ture. Pirezedaantiin yuunivarsitichaa Doktar Muktaar Mohaammad gaaffileen karaa barattootaa ka’aa jiran sirriifi furmaata kan barbaadan ta’uu himu.
Yuunivarsitichatti hojiin baruu barsiisuu kan dhaabate ajjeechaa gara jabummaa ilmaan Oromorratti raawwateefi qormaata bahumsaa eebbaan booda kennamu sababa godhachuun akka ta'e kan himan pirezidaantichi, gaaffilee akka Yuunivarsiitichaatti deebi'uu danda'an furuuf hawaasni yuunivarsiitichaa sosochii taasisaa jira jedhu.
Yuunivarsiitichi dhiyeenya hundeeffamuusaarraa kan ka'e meeshaaleen hojii baruu barsiisuuf barbaachisoo ta’an kanneen akka kitaabilee wabii, kompiitara, daandii, bishaaniifi nyaata waliin walqabatanii guuuu miti kan jedhan Pirezedaantichi, hanqinoota kanneen furuufis sochiin cimaan taasifamaa jira. Gaaffileen akka mootummaatti deebi'uu qabaniifi deddeebbiin ka’aa jiran deebisuuf xiyyeeffannoon kennamuu baannaan barnoota qulqullina qabu kennuufi lammii ga'umsa qabu horachuun hindandahamu jedhu.
Dhaabaa Lataa yuunivarsitichatti barataa muummee Qonnaa Waggaa 3fa yoo ta’u, gaaffiin barataa gaaffii biyyaa waan ta’eef yeroon deebi'uufii qaba. Ajjeechaan yeroorraa yerootti maatii barattootaarratti raawwatamaa jirus barnoota akka dhaabnuuf sababa ta’aa jira. Qaamoleen ajjeechaa kana raawwatanis seeratti dhiyaachuu qabu.
Dhimmi dabalataa hojiin baruu barsiisuu yuunivarsiitichaa akka gufatuuf sababa ta’an keessaa inni biraan dhimma sababa walitti bu'iinsa daangaa Oromiyaafi Somaaleetiin lammiilee Oromoo qe'eefi qabeenya isaaniirraa buqqa'aniifi namoonni lammiileerratti ajjeechaa raawwatan seeratti dhiyaachuu dhabuu waan ta'eef mootummaan dhimma kana irratti xiyyeeffatee furmaata kennuu qaba. Kuni ta’us barnoota addaan kutuun sirrii waan hintaaneefi qabsoo eegalame kan gufachiisu waan ta’eef barattootni barnootasaaniif xiyyeeffannoo kennuu akka qaban yaadachiisa.
Qabsoon barnotaan hindeeggaramne qabsoo bittinnaa'aadha kan jedhu barataan kun, barachaa gaaffachuufi sagalee dhageessisuun ammayyummaa waan ta'eef barnoota addaan kutuun dinagdee maatiifi biyyaa miidhuudha.
Walumaagalatti, hojiin baruu barsiisuu yuunivarsitichaa dhibbeentaa 90 irra kan ga'e yoo ta'u, barattoota sababa garaa garaan hanga ammaa barumsa isaanii irratti han argamneef waamicha taasisaafii jira. Qabsoon barnootaan hindeeggaramne qawwee rasaasa hinqabne waan ta’eef barnoota ofiitti deebi'uun qabsoo ofii seeraan itti fufuun jijjiirama fiduuf miirri kutannoo jiraachuun barbaachisaadha.
Torban kana/This_Week 43563
Guyyaa mara/All_Days 1468343